दोषी ‘२० लाख’ « Intro Nepal
दोषी ‘२० लाख’
Published On : १३ श्रावण २०७६, सोमबार ११:४९
केही समय यता नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कलाकारको पारिश्रमिकलाई लिएर निकै प्रचार हुन थालेको छ । फलानो कलाकारले फलानो फिल्मको लागी यती रकम लियो भन्ने समाचार हेडलाइन बन्ने गरेका छन् । तर, त्यही कुरालाई लिएर पछिल्लो समय कलाकारहरुबाटै विभिन्न कृया प्रतिकृया आउन थालेका छन् । कलाकार कै पारिश्रमिकको बारेमा प्रतिकृया दिँदा नायिका स्वस्तिमा खड्का विवादमा परेकी छिन् ।
चलचित्र ‘हजार जुनी सम्म’को ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा नायिका खड्कालाई कलाकारको पारिश्रमिक चर्चाको विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो । उनले सो प्रश्नको जवाफ दिँदै कुनै पनि कलाकारले २० लाख पारिश्रमिक लिन्छ भने सो कलाकारले कम्तिमा ५० लाख बराबरको कलेक्सन गर्न सक्नु पर्ने उनको धारणा थियो । पारिश्रमिक २० लाख लिएर ५ लाख पनि कलेक्सन गर्न नसक्ने हो भने निर्माता माथी अन्याय हुने उनको आशय थियो । उनको यही भनाई विवादित बन्यो ।
स्वस्तिमालाई यो प्रश्न सोध्नु केही दिन अगाडी नायिका पुजा शर्माले एक बेनाम फिल्मको लागी २० लाख पारिश्रमिक लिएको समाचारहरु आएका थिए । पुजाले २० लाख नै लिएको समाचार आउनु र स्वस्तिमाले प्रश्नको जवाफमा २० लाख भन्नु संयोग मान्न पनि सकिन्छ ।
तर, पुजाले २० लाख लिएको खबरले खुसी भएका पुजाका फ्यानहरुलाई स्वस्तिमाको उक्त अभिव्यक्ती मन परेन र उनी माथी खनिए । स्वस्तिमा माथी पुजाका फ्यानको यती दवाव आयो कि उनले स्टाटस नै पोस्ट गर्नु पर्यो । स्वस्तिमाले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लामो स्टाटस पोस्ट गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ती कसै प्रती कटाक्ष नभएको स्पस्टिकरण दिइन् ।
उक्त स्टाटसमा स्वस्तिमाले पत्रकारले आफ्नो धर्म बिर्सिएका कारण त्यसो हुन पुगेको बताइन् । आफ्नो अभिव्यक्तीमा पुजा शर्माको नाम घुसाइनु पत्रकारिताको धर्म विपरित भएको आशय सहितको उक्त स्टाटसमा उनले सही सूचना दिँदा पत्रकारिताको ईज्जत बढ्ने र जथाभावी नाम जोडेर कलाकारिताको बेईज्जती गर्दा पत्रकारिता पनि तुच्छ हुन्छ, बेकारको बन्छ भनेकी छिन् ।
उनले उक्त स्टाटसमा पछिल्लो समय पत्रकारहरुले आफ्नो कर्मक्षेत्रलाई नै बिर्सेर यसले त्यस्तो भन्यो, उसले त्यस्तो भनी भन्दै आरोप लगाउँदै, नाम जोड्दै, तथानाम भन्दै, मनगढन्ते समाचार सम्प्रेषण गर्नमा अग्रसर रहेको घुमाउरो आरोप समेत लगाइन् । उनले मिडियालाई निष्पक्ष र जिम्मेवार हुन समेत सुझाएकी छिन् । स्वस्तिमाले हालसालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा एउटा क्यामरा र माइक बोक्दैमा कसैलाई पत्रकार मान्न नसकिने समेत बताएकी छिन् ।
केही समय अगाडी देखी नै जव कुनै कलाकार विवादमा पर्छ तव त्यसको तारो पत्रकार बन्ने गरेका छन् । आफु बच्न कै लागी कलाकारहरु पत्रकार माथी खनिन थालेका छन् । कुनै विषयमा प्रश्न सोध्नु पत्रकारको धर्म र कर्म दुवै हो । त्यसको जवाफ दिनु नदिनु कलाकारले सोच्ने कुरा हो । प्रतिकृया दिने नदिने उसको अधिकारको कुरा हो । प्रश्न सोधियो भन्दैमा जवाफ दिनै पर्छ भन्ने छैन । जव जवाफ दिइन्छ त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक कृया प्रतिकृयाका लागी कलाकार आफैँ तयार रहनु पनि पर्छ । पत्रकार माथी दोष थोपरेर पानि माथी ओभानो बन्न पक्कै सकिन्न होला ।
स्वस्तिमा खड्काको लागी पनि यही लागु हुन्छ । प्रश्न उनैलाई सोधिएको हो, जवाफ उनैले दिएकी हुन् । संयोग बस कसैको वास्तविकता संग मेल खायो होला पनि । तर, त्यसमा आएको नकारात्मक टिप्पणीले आत्तिएर क्यामरा र माइक बोक्नेलाई पत्रकार नै मान्दिन भन्न छोड्ने हो कि ? हिजोका दिनमा त्यही क्यामरा र माइक बोक्नेले नै स्वस्तिमाको करियर उकास्नमा कतै न कतै कुनै न कुनै रुपमा ईट्टा थपेकै छन् । त्यसलाई नकार्न स्वस्तिमाले सक्लिन र ?
यो भन्दै गर्दा दोष कसको ? प्रश्न सोध्ने पत्रकारको या जवाफ दिने स्वस्तिमाको ? या पुजाको नाम जोडेर समाचार तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने पत्रकार (स्वस्तिमाको भाषामा यूट्युबर) को ?
खासमा दोष त्यो ‘२० लाख’को हो । जुन पुजाले लिइन् र स्वस्तिमाले उच्चारण गरिन् । पुजाले २० लाख नलिएको भए वा स्वस्तिमाले २० लाख भनेर उच्चारण नगरेको भए यो विवाद आउने नै थिएन । न त फिल्म प्रदर्शनमा आउन लागेको बेला स्वस्तिमाले क्यामरा र माइक बोक्ने पत्रकार नै होइनन् भनीरहन पर्थ्यो ।